मेलम्चीको पानीमा जस लिन होडबाजी, ढिला भएकोमा जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ?
मेलम्ची आयोजनाको परिकल्पना भएको ४६ वर्ष पुग्यो । यसको सम्भाव्यता अध्ययन भएको २७ वर्ष पुग्यो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समिति गठन भएको २० वर्ष भयो । त्यसयता मेलम्ची विकास समितिले आयोजनाको काम निरन्तर अगाडि बढाइरहेको थियो । तर, मन्त्री फेरिएपछि आयोजनाको कामले गति लिन सकेन । २६ वर्षको अवधिमा प्रेमबहादुर सिंहदेखि विना मगरसम्म २२ जना मन्त्री भए । २२ जना मन्त्रीले २६ वर्षमा ७० प्रतिशत काम गर्दा त्यसबारे खासै चर्चा भएन ।
करीब ३० वर्ष लामो कसरतपछि सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं आइपुगेपछि दलहरूबीच जस लिने होडबाजी चलेको छ । मेलम्चीको पानी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औपचारिक रूपमा भृकुटीमण्डपबाट काठमाडौंमा वितरणको शुरुआत गरेपछि जस लिने होड झनै चलेको छ ।
मेलम्चीको पानी आएपछि सत्तारूढ नेकपाले आप्mनो पालोमा मेलम्ची ल्याएको भन्दै आप्mनो सफलताको चर्चा गरेको छ । उता नेपाली कांग्रेसले प्रचार सामग्री बनाएर यसको जस कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिएको छ । भट्टराईले त्यतिबेला चुनावी सभाहरूमा मेलम्चीको पानी ल्याएर सडक पखाल्ने बताएका थिए । उसले आप्mना नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको परिकल्पना र योजनाअनुसार काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आइपुगेको भन्दै जस लिने प्रयत्न गरेको हो ।
राष्ट्रपतिले मेलम्चीको पानी वितरणलाई औपचारिक रूपमा शुरू गर्नै लाग्दा नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगरपालिका १० नम्बर वडा अध्यक्ष रामकुमार केसीले नयाँ बानेश्वर पीपलबोटस्थित आकाशे पुलमा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको तस्वीरसहितको ब्यानर टाँगेका छन् । सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपनापछिको मेलम्ची पानीको योजना राजधानीवासीको दुःखको निराकरण ३० वर्षमा यथार्थमा परिवर्तन भन्ने कुरा ब्यानरले लेखाएको छ ।
उता, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीले मेलम्ची आएको जस लिन नेता भट्टराईको सपना साकार भएको भन्दै भिडियो नै बनाएर सामाजिक सञ्जालमा हालिसकेको छ । जहाँ नेता भट्टराईले मेलम्चीबारे बोलेको भाषणसमेत राखिएको छ ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले परिकल्पना गरेर अध्ययन गरिँदा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउन सक्ने ठहर भएको थियो । कमल थापाले यसको श्रेय राजालाई दिएका छन् । तर, यस अवधिमा मेलम्चीमा भएको भ्रष्टाचारका बारेमा भने कसैले पनि बोलेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मानिए पनि यसलाई राष्ट्रिय लज्जाको विषयसमेत मानिन्छ । एउटा खानेपानी आयोजना बन्न ३ दशक लाग्नु भनेको काम गर्न नसक्नु हो । आयोजना ढिला हुनुमा भ्रष्टाचार र कमिशन पनि एउटा कारण हो । जजसले जस लिन होडबाजी गरेका छन् तिनले यसमा भएको ढिलाइ र भ्रष्टाचारको पनि जस लिने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
बालाजु, काठमाडौं ।
वस्तु बजारको अँध्यारो पक्ष[२०७८ बैशाख, ३]
बलियो सरकारसँग जनताको अपेक्षा[२०७७ चैत, २७]
मेलम्चीको पानीमा जस लिन होडबाजी, ढिला भएकोमा जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ?[२०७७ चैत, २२]
प्रचारको भोक कि काम पनि ?[२०७७ चैत, २२]
कोरोना संक्रमण बढ्दै छ, सतर्क बनौं[२०७७ चैत, २२]